nwetara ndị a top 10 kasị mma Spotify listi ọkpụkpọ? Ị nwere ike nweta ihe ebe a
Top 10 Best Spotify Ndetuta egwu ọkpụkpọ? Ị nwere ike nweta More Lee
Spotify gbanweworo na ụlọ ọrụ nke online music gụgharia na otu ya kacha mma atụmatụ bụ ikike ike ma na-eso listi ọkpụkpọ. Ọrụ nke Spotify eme ya mgbe niile. Ònye na ụwa na-agaghị achọ ndị kasị mma nke music chịkọtara? Ya mere, anyị kpebiri ime ka unu n'elu 10 nke kasị mma Spotidy listi ọkpụkpọ oge a. Ndị a na-eze kwuru, kasị ewu ewu na listi ọkpụkpọ niile oge on Spotify. Ya mere, unu na-n'aka-amasị ha otutu!
Part 1.Find n'elu listi ọkpụkpọ site na iji-agagharị ọrụ na Spotify
Part 2.Search maka listi ọkpụkpọ site na iji Spotify search nhọrọ (Desktọpụ)
Part 3.Search maka listi ọkpụkpọ site na iji 'Gịnị bụ New' ngalaba
Part 4.Find listi ọkpụkpọ site na iji ọzọ weebụsaịtị
Lee ndị njikọ:
Taa Top Hits http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/5FJXhjdILmRA2z5bvz4nzf
Na-agba egwu Mega Mix Izu ụka Hangouts http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/5yolys8XG4q7YfjYGl5Lff
Ọnọdụ Booster http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/6uTuhSs7qiEPfCI3QDHXsL
Gị Favourite Coffeehouse http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/4BKT5olNFqLB1FAa8OtC8k
Izu ụka Hangouts http://open.spotify.com/user/spotify/playlist/5Oo5QuAOjjXMMXphFqC6eo
Mgbe ọ na-abịa ekpori music, Spotify ka ọ dị mfe na ọtụtụ nde ndị nhọrọ, na-dịnụ site ọtụtụ listi ọkpụkpọ na i nwere ike ịhụ onwe gị. Ka anyị ngwa ngwa anya na ọtụtụ ụzọ mmadụ pụrụ ịhụ listi ọkpụkpọ maka Spotify.
Chọta top listi ọkpụkpọ site na iji-agagharị ọrụ na Spotify
Chọgharịa bụ nchịkọta nke Spotify ji mma listi ọkpụkpọ na android na iOS. Gịnị mere ka ọ oké bụ na playlist curation na-eme na ndị ọzọ nke mmadụ na mmekọrịta bụrụ na nke-agagharị dị ka tụnyere Chọpụta na Radio, abụọ ndị ọzọ Spotify atụmatụ na n'ụzọ dị ukwuu dabeere algọridim.
Chọọ maka listi ọkpụkpọ site na iji Spotify search nhọrọ (Desktọpụ)
Dị nnọọ ka na ikpe nke Google search, ị pụrụ nanị pịnye na ihe ọ bụla na ị chọrọ ka ihe atụ: 'The Top 100' ma nweta ogologo ndepụta results na na akpan akpan isiokwu. Ozugbo search zuru ezu, ị ga-ahụ a Playlist ngalaba na top. Ị nwere ike wee pịa na nhọrọ 'Lee niile' na ala n'aka nri n'akụkụ aka nke nkebi nke a na-agagharị ebe niile listi ọkpụkpọ na-ebu gị isiokwu.
Chọọ maka listi ọkpụkpọ site na iji 'Gịnị bụ New' ngalaba
Ọ bụrụ na ị nweta ngalaba 'Gịnị bụ New', ọ ga-emepe a ndepụta nke ihe niile nke bụ ihe ọhụrụ na Spotify, gụnyere listi ọkpụkpọ. Nke a bụkwa oké ụzọ anya maka kasị dị ugbu a ndepụta ọkpụkpọ nke egwu niile.
Chọta listi ọkpụkpọ site na iji ọzọ weebụsaịtị
E nwere ọtụtụ online ego na ụdị nke weebụsaịtị dị ka http://playlists.net/ na http://topsify.com/ na i nwere ike iji nweta ihe kasị mma listi ọkpụkpọ maka onwe gị na Spotify. N'otu oge, na ndị a weebụsaịtị, ị nwere ike ịme nchọgharị site adịghị agwụ agwụ Spotify listi ọkpụkpọ, ma curated site ndị ọkachamara na osụk site na ọrụ nile nke ụwa. Nanị pịa na listi ọkpụkpọ na-amasị gị ma ma na-egwu ha ma ọ bụ soro ha.
> Resource> Spotify> Top 10 kasị mma Spotify listi ọkpụkpọ